Dowladda Soomaaliya oo soo daabacaysa 20 kun oo shilin oo isku dhegan - BBC News Somali
Shilinka Soomaaliga lacag ka yar oo lagu sarrifo hadda suuqyada way ka dhamaatay.
Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya Bashiir Ciise Cali ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey Shilin Soomaaliga cusub ee dowladda qorsheyneyso in ay soo daabacato markii ugu horeysey muddo 27 sano ah.
Shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu ku sheegey in dowladda soo daabici doonto lacag tirsigeedu badanyahay oo isku dhegan sida Shs20,000 (labaatan kun shilin).
Lacagta ugu weyn ee hadda shaqaysa waa lacagta Shs1, 000 (kunka shilin) oo la daabacay sanaddii 1991-dii si rasmi ah xiligii ay sii dhacaysay dowladdii Jaalle Maxamed Siyaad Barre.
Qorshaha lagu soo daabacayo lacagta cusub waxa uu soo biloowdey sanado ka hor, hase yeeshee ma jirin wax talaabo rasmi ah oo laga qaaday.
Balse dowladda hadda jirta ayaa shirkii London ee Soomaaliya loo qabtay bishii May ee sanadkan la tagtay qorshe raasumaal loogu raadinayo sidii loosoo daabici lahaa lacagta cusub, sidaasi darteedna Bangiga Adduunka ayaa bixinaya lacag dhan $60 malyan oo doolar oo lagu soo daabacayo shilinka cusub.
Diidmada Kunka Shilin
Todobaadyadii ugu dambeeyey waxaa meelo ka mid ah dalka laga diidey lacagta kunka shilin, kadib markii xarakada Alshabaab ay soo saartay amaro la xiriira in shilin Soomaaliga aanan wax lagu kala iibsan karin.
Sidoo kale magaalooyin ka tirsan gobolada dhexe sida Guriceel ayaa laga diidey kunka shilin kadib markii ay suuqa soo galeen lacago been abuur ah.
Lacagaha been abuurka ah ma ahan wax cusub, intii uu dalka burburka ku jireyba daabacaadoodu waa ay socotey, waxaana hadda loo maleynayaa in lacagta suuqa ku jirta ay u badantahay tan been abuurka ah marka la barbardhigo tii la daabacay 1991-dii.
Waxaase xaalka oga sii daray, lacagta hadda shaqaysa oo aad u duugoowdey, islamarkaasina in badan oo ka mid ah aanan la isticmaali karin.
Waxaa intaasi dheer in qiimo dhaca ku dhacay shilinka owgiis aysan suurtogal ahayn in qofka si sahal ah uu jeebka ugu qaato lacag intii uu doono, wuxuuna u baahanyahay qofka in uu bac ama jawaan ku qaato.
Guddoomiyaha bangiga dhexe Bashiir Ciise waxa uu sheegey in lacagta cusub ee lasoo daabacayo loo naqshadayn doono qaab casri ah oo aanan la been abuuri karin.
Taariikhda Shilin Soomaaliga
Magaca Shilinka waxa uu baxay sanadkii 1921-dii xiligaasi oo gumeystihii Ingiriiska uu meel mariyay gaar ahaan gobolada Waqooyi oo uu ka talinayay, laakiin si rasmi ah waxaa loo qarameeyey 15-kii Bishii Diseembar, 1962-dii.
Xiligaasi Bangiga Dhexe ee Soomaaliya waxa uu daabacay lacag xaanshi ah oo ka kooban 5 shilin, 10 shilin, 20 shilin iyo 100 shilin.
Isbadalkii labaad waxaa shilin Soomaaliga lagu sameeyey 1975-tii iyo 1979-kii xiligaasi oo markale dib loosoo daabacay ama loo cusbooneysiiyey lacagtii hore.
Balse sanadkii 1983-dii ayaa la daabacay 50 shilin oo xaanshi ah, iyada oo 1989-kiina la daabacay 500 shilin markii ugu horeysey.
Ugu dambeyntii 1991-dii ayaa la daabacay lacagta kunka shilin ee isku taala, waxayna noqotey tirsigii ugu badnaa ee shilinka laga daaboco ebed.
20-ka kun shilin ee hadda la daabacayo ayaa waxa ay dadka u fududeyneysaa in ay jeebka ku qaataan lacag ku filan oo maalinkii wax ku gataan.